Uwa nile nke uwa、dika ndu nke ndu n’ezie、di oke oke nke na o ga-ewe gi ndu ugbua ka i ghagharia ihe o bula.
Iji mee ka nkeahụbụrụeziokwu、site na ogeịmechara、ọga-abụrịrịnaịga-enwe ikeịmaliteịmaliteọzọ.
Ihe niile a maara nkeọma、mana ole n’imegịmaara naọdịnayaịna-ezute naweebụbụobereọnụmmiri icepe?
アマ： Tupuịgan’ihu、ọdịmkpa kaịghọtanaọtụtụihedịna Web GbaraỌchịchịna-akwadoghịiwu。 N’agbanyeghịiheịna-eme、ịga-enwe ikeịnọna-amaghịaha。 Tinye na ihe izendụgị!
0.1 1. Ibudata mawụnyeihenchọgharịTOR
0.3 3. DuckDuckGobụenyigị
0.4 4. Debanye aha makaadreesịozi-e
0.5 5. Igwentanetịweebụnchịkwa
1 Kedu otu nchekwa sidịna Play na Web GbaraỌchịchịrị?
1.2 Egbe、Gold na Egonkịtị
1.3 Ntinye na Mmebi IwuMmekọahụ
2 NchịkọtaNtanetịWeb Web
2.1 1- Gbaambọhụna ihenchọgharịTor na njedebe
2.2 2.WalzọZoro Ezo
2.4 6.ZụtaBitcoins na Blockchain
1. Ibudata mawụnyeihenchọgharịTOR
N’agbanyeghịnaọdịugbu adịka ihenchọgharịana-ejikarịeme ihe iji nwetaakụkụnkeWeebụGbaraỌchịchị、TOR（aka、ihenchọgharịweebụ）na-emepụtaiji nyere okwịwunukw ukuịkwukịukw ukw ukun.
Taa、ọbụotu n’imeụzọole na ole iji nweta .onionweebụsaịtị、nkedịna Web Dark.
TORbụnsụgharịnkenchọgharịweebụFirefox、gbanwee iji kwe kandịụrụna-agagharịnaweebụn’enweghịaha。 a na-emenchọgharịahụiji gbochie maọbụnyendụmọdụmegidemgbalịndịụrụiji mee ihendịnwere ikeigosipụtanjirimara ha、dịkaịmeghachiakụkụnke window windm、dịatọị.
Mgbeịna-echere TOR ibudata、wep weta oge iji rachie otu empempeakwụkwọkpuchie anya igwe elekere kameragị。 Ịmaghịihe nwere ike ime.
Na-lelee vidiyo nke mmeghe site na TOR.
NetwọkNhọrọOnweGị（VPN）bụsavaịjikọọna iji nwetaweebụ。 Savandịa na-enyere akaịchekwammalitegịma nwee ikeịṅomiebe sin’ọtụtụebendịọzọn’ụwa。 Ọbụezie na TOR na-ekpuchi njirimaragị、ọdịghịezobeọnọdụgị.
Makandịna-ejighiọrụVPN nambụ、ịnwere ike tinye otu nkekachasịmma wee banye ExpressVPN。エシェブラọbụlagodina ha nwereụbọchịụbọchị30 na-enweghịogeịga-enyochaọrụha.
na-atụaro VPN mgbeịna-achọgharịnaỌchịchịrịỌchịchịrị。 Ọna-agbakwunyeọkwanchebeọzọna datagịma zooọnọdụgị。 Biko kwadondịmgbasa ozianyị-ExpressVPN manọrọkwanantanetịmgbeịna-emenchọgharịỌchịchịrị.
Ịna-agagharịna Web GbaraỌsọdịiche。 Cheta usoro nkena-emekarị： ‘Googlebụenyigị’？ Ọfọn、Googleanaghịedepụtasaịtịna Web GbaraỌchịchịrị、ya mere n’ebeahụ、ezigbo enyigịga-abụDuckDuckGo、nkena-arụọrụyiri ya.
4. Debanye aha makaadreesịozi-e
Ugbu a naịdịnjikereịga、ọbụogeịdebanyemakaadreesịozi-ena-enweghịikeịchọta。 Gmail sin’ajụjụahụpụta、ịga-achọadreesịozi-e iji deba ahaọtụtụweebụsaịtị.onion.
Ndịabụole na oleịga-enwe ikeịtụle*：
*Rịbaama nandịana-abịana .onion ngalaba、nkeịchọrọịnwetaiji TORnchọgharị。 Ndịnyocha oge niiledịkaChrome na Firefoxagaghịarụọrụ.
.タマネギbụngalaba ejiri kpam kpam naweebụsaịtịỌchịchịrị。 Ndịa yiri ngalaba a na-eme mgbe niile、manaenweghịikeịnwetayana-enweghịihenchọgharịpụrụichedịka TOR.
Ndịabụụzọdịmma nkena-enweghịnsogbu .onionadreesịịnwere ikeịnwale：
Ennnre nnukwundepụtankeweebụsaịtị.oniondịnaọna-ewe oberemgbalịịchọtaha。 Ọzọkwa、buru n’uche naịnwere ikeịdabana ihendịọzọ（naọzọ、nkena-akwadoghịiwu）na Web GbaraỌchịchịrị.
Ihuenyo nke ebenrụọrụweebụgbaraọchịchịrị。 Iheịnwere ikeịtụanyaịhụn’ogeọbụlanaweebụsaịtịGbaraỌchịchịrị-jidereweebụsaịtị.
Kedu otu nchekwa sidịna Play na Web GbaraỌchịchịrị?
Ọna-adaụdana enwere obiụtọnkeamaghịama nandịana-adịghịakọwa、manadịkaokéosimiri na-achaanụnụanụnụ、ọtụtụihe izendụna-ezo。 Dịkaonye na-agbaọsọndụJoe（maọbụJill、dịka ikpe nwere ikeịbụ）、oleeotúo sidịizendụiji nyochaa ebenrụọrụweebụgbaraọchịchịrị?
Ọbụezie na e nwere ihendịna-eme n’eziokwu naweebụnke gbaraọkpụrụkpụnaịgaghịahụkarị、tinyereụfọdụn’ime ihendịọzọna-adịghịna aaraị（bebụbụrụ） ịga-esina-asụngọngọ.
ezigbo iheọjọọnandịgbara ya gburugburu nwere ikeịkpatannukwu nsogbu nyegị。 Nke ana-emetụtaọbụghịnaanịndịọjọọ、ma enezre ezigbo nsogbu nke nsogbu na ndmmmmanye iwu、dabere na iheịna-eme.
Ọbụrụnaịkwenyeghi、ebe abụọfọdụiheatụnke ihe na-aga n’ihu na ebenrụọrụweebụgbaraọchịchịrịna ihe si na yapụta;
N’afọmbụa、e boro otu di na nwunye na United States ebubo makaịreọgwụọjọọn’okpuruụlọahịaahịanke MH4Life nasaịtịdịiche icheahịa。ハ・ナ・エジ・ウィーバ・ガラ・シュチャチュラー・エレ・エド・ド、オド・オピオイド・ンケ・ア・ナ・エメジュカル・ド・カ・グワ・ナンドル・ナ・イヘ・ンド・アズ・ナ・アドゥグマ・マ。 E jidereụzọabụọahụn’agbanyeghịna a na-ejinkọwanzuzo、netwọkna-emepụtankeọmadịiche iche na ihendịọzọna-ezigara ya.
Egbe、Gold na Egonkịtị
E jidere ihekarịrịmmadụ35 na New York na California site n’akandịụrụgọọmentịna-arụọrụna-ere ahia nanetwọkweebụ。 N’ime ihe ejiderekarịaegbe 100、$ 3.6 na ego na 2,000ビットコイン.
Ntinye na Mmebi IwuMmekọahụ
Otu nwokeポーランド語nọna-emeatụmatụna-ere otu iheatụndị英国jidere naweebụgbaraọchịchịrị。 Mgbeatụmatụyadịntakịrị、e jidere yan’Ịtaliebe onye agha ya kwuru na ya na-etuọnụnaọna-enweta ihekarịrị$ 17 nde na-ereịdọrọụmụnwanyịna ebenụọrụọrụeb.
Ebeọbụnaanyịkwadoro na e nwere ihehefọdụna-emenyeụjọna-eme naweebụndịgbaraọchịchịrị、kaanyịleba anyan’ụfọdụụzọịga-esi zere ha、ọbụrụnaị –
1- Gbaambọhụna ihenchọgharịTor na njedebe
ugbu a、9.0a4 nyochaa nyochana-abịaugbu a site na ntinyeakwukwọbọtịnụAlfaNchọgharị（makandịchọrọịchọpụtaatụmatụọhụrụ）.
Iji ihenchọgharịTordịmkpa iji gaa nasaịt.onion、mana ngwa niile nwereadịghịike mgbeụfọdụ。 Gbaambọhụna ihenchọgharịTorgịdịedebe ya ruo oge magbalịaịnọgidena-eleba anya naọkwanhụsianya.
.タマネギンジコ：Ziki ezoro ezo
N’ịmarana e nwereọtụtụiheịnwere ikeịzụtaebe a、ịga-amara naịghaghịịkwụụgwọya。 Ebe adịka obere akpadijitalụma nyegịohere transact na Bitcoins。 Nnukwu ihedịichebụezie naọtụtụebe a na-eji obere akpa ejiji di iche icheabụghịndịana-amaghịnaọtụtụndịna-ekwenyekwara na iwu ego。オベレアクパアクパボー… nkeọma、zoro ezo.
Ọbụihe ijuanya naụwaga-enwenchịkọta.onion、ma ebeịnọ、Facebookbụ。 Nke a na Facebook kwuru na hamepụtarandịna-achọnetwọkmmekọrịtana-enweghịaha。 Amaghịm na ‘amaghịaha’ na ‘mmekọrịta’na-arụkọọrụọnụ、ma Facebook .onion na-ekwu naọgaghịedebendekọnkeọrụonyeọrụ.
6.ZụtaBitcoins na Blockchain
ビットコインenyeregịakaịnọgidena-enweghịaha、yaịdịukwuu makandịna Tor。 Ntakịgaghịenwetasaịtịa ozugbo site nanjikọ.onion？ Ihe na-eme kasaịtịadịiche ichekarịaụfọdụndịọzọbụna o nwereakwụkwọHTTPS makaadreesịya .onion!
Dịnnọọka Google nwerendịasọmpiyadịka DuckDuckGO（ọbụezie na mhụrụahaahụn’anya！） TORCHbụ検索エンジンdịmfe naミニマリズムịnwere ikeịnwalegịọbụlana-arịaọrịaduck enyi.
ExpressVPNbụọrụVPNadịchaghịmma nke nyeworoọtụtụndịọrụnchebe nzuzoafọniile。 Ntọalaya siri ike nke sava siri ike na-eti mkpuna-enweghịaha na iji kwado ya na ha nwereụdịọchịchịrịdabere nasaịtịha.
Ọdịmgbeọchọrọka iPhone nke Macbook ma sie ikeịkwụụgwọna Bitcoin？ nhọrọn’ebe a makagị、manaụdịnanọmbadịokeがあった。 a na-ekpuchiekwentịniile na-emeghe emepe ma nwee ikeịrụọrụn’ebeọbụlan’ụwa.
Makandịkwenyere nandịntaakụkọnwere onwe、web ojii nwereụdịmbipụtapụrụiche。 ProPublicabụmakandịna-amaja aka ike ike ike、nrụrụaka naụdịadịghịike。 Haabaghịuruọbụlama nwee URLyabasịraara onwe ya nye nkeịnwere ikeịnwetasite na iji ihenchọgharịTor.
Ọbụrụnaịna-achọụzọnchekwa（？）IjizụọahịanaỊntanetị、atụlaegwu、enwekwaranhọrọmakagị。 Dịkaụzọonyeọkaiwu nwere ike isi nweta ego na-aga、ya mere、ọrụESCROW。 Ọbụnaọna-eme na Bitcoin ka ihe niilebụrụihe ana-amaghị.
Ịzụahịana obigịna ihe niile hana-arịọbụego 1.5％dịmma。ハガエジデ・ナカ・ナịンウェレ・イケ・ニョチャア・イヘ・ンドー・アヘ・エジ・エボボ・トゥプ・エト・ハプ・エゴ・グ・マ・ミー・カ・エセモクウ・エセモクウ・ンケ・アト・バール・イッケ・アフ.
Onyeọbụlachọrọụfọdụohere naweebụmgbeụfọdụma SecureDropbụkpọmkwemnkeahụ。 Otúọdị、ọdịntakịrịkarịaizu、ebeọbụna e mere ya ka ikwe kandịna-afụụfụfụnweeụzọisi nyefeeụlọọrụụlọọrụmgbasa ozin’enweghịaha.
Ọdịmmaịmaranasaịtịa ugbu a na-ejikwa ya Nnwere onwe nke Foundation Foundation。 na-ezoroデータniile ma enweghinjikọatọụbụlan’ebeọbụla。 Ọbụn’ezie kpam kpam!
Olee mgbewebsaịtịọjọọbidoro ‘bido’?
Akụkọihe mere eme nkeweebụzoro ezodịka ihe ochiedịkaakụkọntanetịn’onwe ya。 Anyịahụghịndekọndekọaha nke ezigbo“ mmaliteụbọchị” manaanyịkwenyere naWeebụỌchịchịrịanyịmaara taa maliteren’afọ2000 nantọhapụnke Freenet.
Achọpụtaghịsaịtịndịdịnaweebụdịomimi site nanchọtaọchụchọmgbe niile。 Mkpoweebụmiri emi n’onwe yaabụghịiwuna-akwadoghị、manasaịtịụfọdụnwere ike itinye aka na-ezighi ezi。 Isonye na mmemmendịahụnwere ikeịbụiwuna-akwadoghị.
Dịkandụn’ezie、ana-enwekarịihe izendụnantanetịmaweebụgbaraọchịchịrịadịghịiche。 Nchedobụnkedịnaọkachasịmmaịbawanyenchebegịn’ịntanetịn’agbanyeghịiheịna-eme。 Otuụzọisi mee nkeahụbụsite na iji VPN、nke nwere ike izo ya data ma zooadreesịIPgịn’anya anya。 ChọtaVPNKachasịmma na ederede m.
Kedu iheịga-eme nawebsaịtịgbaraọchịchịrị?
Yiri web emeghe、enwereụdịọrụịga-eme naọchịchịrịweb、na-esite na ntinye aka nannọkọọnụahịanaịchọgharịahịaahịadịn’ịntanetị。 Agbanyeghị、enwerekwa ngwongwo naọrụiwuna-akwadoghịna web ojii.
Ọchịchịgbaraọchịchịrịbụahịaana-achịkwaghịachịkwaebendịmmadụnwere ikeịzụtanaanịiheọbụla。 Nke agụnyereegbe、ọgwụọjọọ、anụọhịana-ezighi ezi、vidiyojọgburuonwe ya、paspọtụadịgboroja、akaụntụNetflix、ozikaadịkredit、maọbụọbụnamgbazinye nke onye.
Enkere ikeịchọọgịna Tor?
IjinetwọọdụTor na-eme ka njiri maragịnkeọma、manaọgaghịekwe omume。 Ọdịmmakarịaijiọrụnzuzo raara onwe ya nyedịka ExpressVPN.
DuckDuckGobụigwena-achọihena-akọwapụtaweebụsaịtịon.onion nkepụrụiche naweebụgbaraọchịchịrị。 Ọbụghịweebụgbaraọchịchịrịn’onwe yaあなたはIKE nnweta DuckDuckGo naweebụgbaraọchịchịrịebe a：https://3g2upl4pq6kufc4m.onion/
Ọbụrụnaịnwaleeụfọdụihedịn’isiokwu a、site na ugbu a、ịchọpụtalana ihe m nyeregịbụnsụgharịdịmma nke ihedịadịna WebWeghachị。 N’ụzọdoro anya、ụfọdụn’ime ihendịahụbụihe iwuna-akwadoghịnaagaghịm etinye ha ebe a.
Web GbaraỌchịchịnwere ikeịbụebe nnwere onwe n’ezie。 Dịkaọmụmaatụ、ịnwere ike ikwu okwun’ezoghịọnụbanyerendọrọndọrọọchịchịọbụla、n’agbanyeghịotu aka ekpe maọbụaka nri、na-enwegh oatụegwu uke O bu ihe nwute、nke a na-etinye aka na otutu、nke oma、obugh ihe di nma.
Nwee nnwere onwe ma cheta mgbe niile、ọbụrụnaịgbalịrịọnọna-amaghịaha ma ka na-ejidegị、gaga-enyerịrịgịọgwọmakaọrụọbụlana-akwadoghịnaịchọtana Weeb Asịka e kwuwe、ha jidereọbụnaSaddam Hussein、ọbụghịha?
Uwa nile nke uwa, dika ndu nke nduezie, di oke oke nke na o
E nwere ik louter ọtụtụ ndị na-ede blọgụ ji sị "ego dị na ndepụta."
Det var bara ọtụtụ ndị na-ede blọgụ ji sị "ego dị na ndepụta." Imirikiti
Kira-kira hanya ọtụtụ ndị na-ede blọgụ ji sị "ego dị na ndepụta." Imirikiti ndị